Hate Speech | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Famous Myanmar Muslims who had even improved the Myanmar history are now sadly called Kalars
Irrawaddy: Burma’s Irresponsible New Media »
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချို့ နဲ့ ပညာတတ်တွေကတော့သာမာန်လူတွေလိုမယူပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာအတွက် ဖန်တီးခံ အဓိပ္ပာယ်ကို ယူပြီး မွတ်စလင် အတွက်တော့ ပုံမှန် အဓိပ္ပာယ်ကိုယူပါတယ်။ ပုံမှန်အဓိပ္ပာယ်ကို ယူပုံယူနည်း အတိမ်အနက်တော့ မကွဲပါဘူး။ တခါတရံ ဘာသာတခု ဆိုတဲ့ပုံမှန်အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ ယူပြီး၊ တခါတရံမှသာ ပုံမှန်အဓိပ္ပာယ် နှစ်မျိုးစလုံးကို ယူတာပါ။ ဘယ်မှာမြင်သာလဲဆိုတော့ “မွတ်စလင် နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိကရုဏ်းဆိုပြီး ပြောတဲ့အခါ မှာ မပါလာသေးတဲ့ မွတ်စလင်တွေကိုပါ ဆွဲထည့်ရာရောက်တယ်” ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကို ကန့် ကွက်သူတွေက အကြောင်းပြကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကန့် ကွက်သူ တွေအ တွက် မွတ်စလင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဖန်တီးခံအဓိပ္ပာယ်ဘက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြား ဆက်ဆံသူများ ပြန်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
Tags: Facebook, Hate speech, Twitter
This entry was posted on July 11, 2012 at 2:17 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.